अमेरिकाबाट उपाध्यक्षमा विजयी काे हुन साेनाम र रविना ? | News Portal from USA in Nepali
अमेरिकाबाट उपाध्यक्षमा विजयी काे हुन साेनाम र रविना ?
एनआरएनको निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा सोनाम लामा र महिला उपाध्यक्षमा रविना थापा विजय भएका छन् । लामा कुमार पन्त र थापा कुल आचार्य प्यानलबाट उठेर जीत हासिल गरेका हुन । सोनाम लामाले ८९८ र रविना थापाले १ हजार २ सय ३२ मत ल्याएकी थिइन ।
को हुन सोनाम लामा
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङ हो उनको थातथलो । तर अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसोबास गर्ने सोनाम लामा व्यवसायी तथा एनआरएनएका सामाजिक व्यक्त्वि पनि हुन । उनी लामो समय देखि एनआरएनए अभियानमा लागेर आफुलाई चिनाइरहेका छन् । एनआरएनए उत्तर अमेरिकाको पुर्व क्षेत्रिय सयोजक लामा लामो सयम देखि एनआरएनएको गतिविधीहरुमा आफुलाई सोमल गराउदै आएका छन् । औपचारिक रुपमा २००९ देखि २०१३ सम्म आइसिसि सदस्य भएका लामा २०१५ मा क्षेत्रीय संयोजक बने ।
अमेरिकाको प्रसिद्ध सहर न्युयोर्कमा लोकप्रिय याक रेष्टुरा देखि अर्गानिक सुपरमार्केटका संचालक लामाले आफनो थातथलो मुस्ताङको मुक्तिनाथ क्षेत्रमा करोडौको होटल, विशाल बुद्ध स्तुपा देखि स्याउ खेतीमा करोडौको लगानी स्वदेशमा पनि भित्राएका छन् । उनले काठमान्डौको ठमेलमा समेत होटल संचलान गरेका छन् ।
सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय लामा नेपालमा विनाशकारी भुकम्प जादा राहत वितरणमा आफै खटिएर सहयोग पु¥याएका थिए ।
उनले निस्वार्थ सेवाभावले सामाजिक सेवा प्रतिको आफनो निरन्तर लगावलाई सबैको सहयोग र साथले सदैव पुर्णता दिने कुरामा उनी विश्वस्त छन् । परिवर्तनशिल परिस्थिति र बद्लिदो समयक्रम संगै संघको उद्देश्य र लक्ष्यहरु परिमार्जन हुने क्रममा धेरै कार्यहरु गर्न बाकी रहेको भन्दै ति काम सम्पन्न गर्न र गराउन आफुले पहल गर्ने बताएका छन ।
को हुन रविना
अमेरिकामा बसोबास गदै आएकी रविना थापा म्याग्दीमा जन्मेर पोखरालाई कर्म घर बनाएकी हुन ।
अमेरिकाको डिसि महानगर क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर बसेकी थापा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा समेत आवद्ध रहेर काम गदै आएकी छिन् ।
सामुहिक नेतृत्वको आवाज संस्थागत दिगो विकास भन्ने मुल मन्त्र बोकेर उनी चुनावी अभियानमा होमिएकी थिईन ।
उनले एनआरएनएमा महिला नेतृत्वको अभाव हुदै आएकोले त्यसलाई परिपुर्ति गर्न आफुले खुल्ला तर्फ महिला उपाध्य़क्षमा उम्मेदवारी दिएकी थिईन । म्याग्दिमा जन्मिएर कास्कीलाई आफनो कर्म थलो बनाएकी थापा लामो समय देखि अमेरिकामा रहेर सामाजिक कार्यमा कृयाशिल रहदै आएकी छिन् । उनले एनआरएनएमा उम्मेदवार मनोनयका लागी तोकिएको चको शुल्कले एनआरएनएमा आउन चाहने धेरैको ढोका बन्द भएकोमा उनले असन्तुष्ट पोखेकी छिन् ।